बाबुरामको विरोध गर्न बवरमहल पुगेका नेकपाका कार्यकर्तालाई लकडाउन छुट ! (भिडियो) - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बाबुरामको विरोध गर्न बवरमहल पुगेका नेकपाका कार्यकर्तालाई लकडाउन छुट ! (भिडियो)
काठमाडौं। सांसद अपह रणको उजुरी दिन आज (मंगलबार) सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरु बिरुद्ध नेकपाका विद्यार्थीहरुले जुलुस निकालेका छन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालय उजुरीको लागि जाँदै गर्दा अबरोध गर्ने प्रयास गर्दै नेकपा समर्थित विद्यार्थीहरुले नारावाजी सहित जुलुस निकालेका हुन् ।
उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ सहितका नेताहरु सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल पुग्दा नेकपाका यूवा विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ताहरु जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको बिरोधमा चर्का नारावाजी गरेर बसेका थिए। उनीहरुले प्रहरी घेरालाई तोड्दै जसपाका नेता कार्यकर्ता बिरुद्ध जाइलाग्ने प्रयास पनि गरेका थिए।
सरकारले अति आवश्यक देखि बाहेक २५ जना भन्दा बढी मानिसको भिडभाड नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर सत्तारुढ दलकै भातृ संगठनहरुले सरकारी निर्णयको धज्जी उडाउँदै आज बवरमहलमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आम मानिसहरु ‍औषधि किन्न जाँदा लाँठ्ठी बर्साउने प्रहरी प्रशासनले लकडानको बेला किन यसरी भिड जम्मा हुन दियो त भन्ने प्रश्नको उत्तर भने पाइएको छैन ।
भिडियोमा हेर्नुहोस लकडाउनको बेला बबरमहलमा विद्यार्थीको जुलुस
दर्ता भएन उजुरी
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् अपह-रणको उ-जुरी जिल्ला सरकारी वकिलले पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। समाजवादीका नेता तथा अधिवक्ता कृष्ण शर्माले सहन्यायाधीवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी मिटिङ भनेर बाहिर रहेको र अन्य कर्मचारीले दर्ता गर्न नमानेको जानकारी दिए।
गत आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पूर्व उपप्रधामन्त्री उपेन्द्र यादवसहित काठमाडौंस्थित टेकु प्रहरी परिसरमा उजुरी दर्ता गर्न पुगेका थिए तर त्यहाँ पनि दर्ता गर्न नमानेपछि उनीहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका हुन्।
आम जनताको प्रश्न : पूर्व प्रधानमन्त्रीले उजुरी दिँदा त दर्ता हुँदैन भने आम मानिसको के हाल होला ?
सांसद् अपह-रणको उ-जुरी टेकु प्रहरी परिसर र सरकारी कार्यालयलेले दर्ता गर्न नमानेपछि आम मानिसहरुमा एउटा प्रश्नले डेरा जमाएको छ । देशको पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिसहितका भिआइपीहरुले हाम्रो सांसद अपहरणमा पर्नुभयो भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीले सो मुद्दा दर्ता गर्न मानेको छैन भने आम मानिसहरुको मुद्दाको हाल के होला ?
टेकु प्रहरी परिसरले यो घटना महोत्तरीमा घटेको हुनाले महोत्तरी जिल्लामा नै दर्ता गर्नुहोस भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पठाइदिएको थियो । तर विगतमा पनि देशका विभिन्न जिल्लामा घटेका घटनाहरु काठमाडौंमै दर्ता भएका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । यो घटना महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्मको भएकाले काठमाडौंमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भनाइ छ भने । पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले यो मुद्दा काठमाडौं मात्र होइन भक्तपुर काभ्रे जुनसुकै जिल्ला पनि दर्ता गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, वैशाख १६ २०७७ २०:३८:१०